Ilengiselwe isigwebo indoda ebanjwe isocansini nenja | News24
LAST UPDATED: 2018-11-16, 14:16
Ilengiselwe isigwebo indoda ebanjwe isocansini nenja
Johannesburg - Ilengiselwe isigwebo seminyaka emihlanu indoda eneminyaka engu-45 ubudala yaseGoli ngemuva kokubanjwa yenza ucansi nenja enezinyanga ezingu-8 izelwe.
UFanroi Mochachi, ongubaba wezingane ezingu-6, ulahlwe yicala lokulala nesilwane eNkantolo yesiFunda yase-Alexandra ngenyanga edlule.
UJaco Pieterse, oyisikhulu eSandton Society for the Prevention of Cruelty to Animals (SPCA), uthe siyabakhathaza kakhulu isigwebo njengoba uMochachi esezicanasela ngaphandle.
OLUNYE UDABA:Owesilisa ubanjwe ezitika ngocansi nembuzi
"Abakwa-SPCA bangakujabulela ukubonakala kwezigwebo eziqinile mayelana nokuhlukunyezwa kwezilwane, ezifana nezingane ezigakwazi ukuzivikela uma zihlaselwa," kusho uPieterse esitatimendeni.
Isitatimende sithe iMantshi yeNkantolo yesiFunda yase-Alexandra, uSyta Pretorius, ilengisele uMochachi isigwebo seminyaka emihlanu ngemuva kokulivuma icala.
"Imantshi ithe isimo abanjwa kuso umsolwa sitshengisa ubulwane futhi asijwayelekile, eqhuba ngokuthi okubi kakhulu wukuthi ushadelwe futhi unezingane eziyisithupha okufanele engabe uba yisibonelo esihle kuzo. Njengokulindelekile kufanele engabe uzibandakanya ocansini nenkosikazi yakhe," kusho isitatimende.
UPieterse uthe umalume womnini wenja kanjalo namalungu omphakathi bekulindeleke ukuba benze incwadi efungelwe ngokushesha ngemizamo yokuthola incwadi yesivimbelo, ezovimba uMochachi ekutheni angaphinde alubhade lapho okwenzeke khona isigameko.
Isitatimende siphethe ngokuthi i-SPCA yaseSandton kanye neWomen and Men Against Child Abuse (WMACA) bafuna ukubona kwehliswa izigwebo eziqinile emacaleni afana naleli.